Qarax ay 3 qof ku dhaawacmeen oo maanta ka dhacay xerada qoxootiga ee Ifo.
Nairobi:-Qarax ay ku dhaawacmeen ilaa 3 qof ayaa maanya waxa uu ka dhacay xerada qoxootiga ee Ifo ee ku taala Dhadhaab.Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay Suuqa xerada Ifo oo kamid ah xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab halkaasi oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3 qof oo ay ku jirtay Haweenayda Gudoomiyaha ka ah Xeradaas, laguna magacaabo Isniino Cali Raage.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay bambo loo dhigay gaari ay la socotay gudoomiyaha Xerada Ifo, iyo shaqaale ka tirsan Hay’ada Care, halka kuwa kalana ay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa midka gacanta laga tuuro.
Ciidamada Amaanka ayaa goobta gaaray waxa ayna ka sameeyeen baaritaano lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen waxuuna qaraxaasi markale cabsi ku beerayaa shacabka deegaanadaasi.
Xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo, iyadoona arimahaasi ay aad u bateen tan iyo markii ay ciidamada Kenya gudaha u galeen dalka Soomaaliya.